जोशी र अधिकारी सम्मानित « Bagmati Page
कार्तिक ९, २०७८ मंगलबार
फाल्गुन २६, २०७७ बुधबार
काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) अन्तर्गतको वुमेन्स एन्ड स्पोर्टस कमिसनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभ अवसरमा सोमबार विमला जोशी अमात्य र भवानी अधिकारी पोख्रेललाई सम्मान गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जीवनराम श्रेष्ठ रहेका थिए । कार्यक्रमका सभापति नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष एंव वुमेन्स एन्ड स्पोर्टस कमिसनका अध्यक्ष ज्योति राणा रहेका छन् ।
नेपाली खेलकुदमा पुर्‍याएको योगदानका लागि उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले १ सय ११ औं महिला दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्मान गरेका हुन् ।
सम्मान संगै २५ हजार रुपैंया पनि प्रदान गरिएको थियो । विमला एथलेटिक्सकी पूर्व खेलाडी हुन् र उनी एक दशक भन्दा बढी समय मध्यम दूरीको दौडमा सक्रिय रहिन् । उनले सन् १९८७ मा भारतको कोलकातामा भएको तेस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा तीन हजार मिटर दौडमा कांस्य पदक जितेकी थिइन् ।
अधिकारीलाई भने कर्मचारी प्रशासनतर्फबाट सम्मान गरिएको हो । उनी तीन दशकदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छिन् । कमिसनले यसअघि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा प्रदान गर्दै आएको यो सम्मान अबदेखि प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने निणर्य पनि गरेको छ । कमिसनले सन् २०१२ देखि महिला दिवसका रूपमा सम्मान गर्न सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको नेतृत्वमा अझै पनि महिला पछाडि रहेको बताउदै यो क्षेत्र अझ महिला मैत्री हुनु पर्ने बताए ।
नेकपा एस भरतपुर-२१ को अध्यक्षमा बलराम सापकोटा चयन
काठमाडौं महानगरको ८ तले प्रशासनिक भवन शिलान्यास
नेपाली कांङ्ग्रेस ढकारी गाउँपालिका- ३ को अधिवेशन सम्पन्न, रंग बहादुर बुढा सर्वसम्मत चयन
बुढानिलकण्ठका जंगलमा चरा खाेजेर हिँड्ने १६ वर्षे फोटोग्राफर (फोटोमा हेरौं)
नयाँ वर्षमा नुवाकोटको शिवपुरीमा रेस्लिङ महाभिडन्त हुने
बाबुराम र चम्पाको ‘बतासै सरर’ बोलको गीत सार्वजनिक
चितवन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भरतपुर महानगरपालिका–२१ को वडा अध्यक्षमा बलराम सापकोटा चयन भएका छन्
कोलकाता आइपिएलको फाइनल प्रवेश‚ चेन्नईसँग भेट
कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)को जारी सिजनमा फाइनल यात्रा पक्का गरेको छ। तेस्रो
हेटौंडा बागमती प्रदेशको सांसद तथा मन्त्रीहरुका लागि दशैं भत्ता बापत ५१ लाख १९ हजार ८०
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निमाणको शिलान्यास गरिएको छ । सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख
मनोज गजुरेलले गरे दोस्रो विवाह !
काठमाडौं । चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेका छन् । उनले मञ्जु पोखरेलसँग
सुकुम्बासी संघ माडी नगर कमिटीको अध्यक्षमा कुल बहादुर विश्वकर्मा
चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ माडी नगर कमिटीको अध्यक्षमा कुल
मन्त्री नपाएकोमा मेरो असन्तुष्टि छैन : हरिबोल गजुरेल
काठमाडौं । गठबन्धन सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री हुने भनेर बाहिर आएका नामहरुमध्ये स्थायी
दसैँमा घर फर्कने सैनिक परिवारले नि:शुल्क गाडी र हेलिकोप्टर चढ्न पाउने !
काठमाडौं । दसैँमा शहरबाट कसरी घर फर्कने भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता हुन्छ । तर नेपाल सेनाले